HomeWararka MaantaFADEEXAD HOR LEH: Barcelona oo lagu soo Eedeeyey cashuur ay ka bixin weyday Heshiiskii ay kula soo wareegtay Neymar
Kooxda Kubadda cagta Barcelona ayaa lagu soo eedeeyay in ay bixin wayday Cashuur sagaal Milyan oo Euro ah oo la rabay in ay ka dhiibaan heshiiskii ay kula soo wareegtay Xidigga reer Brazil Neymar xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Raadiyaha Cadena Ser ee Spain ayaa shaaciyay in waaxda Cashuuraha Spain ay bayaan ay soo saartay ku caddeysay in dakhli dhan 9 Milyan oo Euro ay soo xarayn weyday Barcelona taasoo qayb ka ahayd heshiiskii 57.1 Milyan oo Euro ahaa oo ay ku soo iibsatay Neymar.
Inkastoo markii dambe la soo ogaaday in lacagtii Barcelona ay ku soo iibsatay Neymar ay ka badayn 57.1 Milyan oo ay ahayd 87 Milyan oo Euro ayaa fadeexaddaasi darteed waxaa isku casilay Guddoomiyihii hore ee kooxda Sandro Rossell. Markii ceebahaasi ay soo baxeen Barcelona waxa ay ku dhawaaqday in ay bixinayso oo dowladda ay soo xaraynayso cashuur dheeraad ah oo gaadhaysa 13 Milyan oo Euro.
Dhinaca kale warar kale oo ku saabsan heshiiskii Neymar ayaa sheegaya in lacagtii 57 Milyan oo laacibkaas lagu iibsaday 17 Milyan oo Euro si toos ah loo siiyay Neymar, halka 40 Milyan oo kale loo qoray Shirkad ay wada leeyihiin Neymar iyo Aabihii taasoo markii dambena la soo ogaaday in 40-ka Milyan ee dambe la qariyay, loona bixin doono qaab lacag qarsoodi ah oo lagu biirin doono mushaharka Neymar dadkuna aysan ka war qabin.
Nimcaan Hillaac Oo La Saftay Laab-saalax Iyo Khilaafka Xidigaha Geeska Oo Cirka Isku Shareeray
16/05/2016 Abdiwahab Ahmed